ဆက်ရက်တောင်ပံဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆက်ရက်တောင်ပံဖြူ (Sturnia malabarica) သည် စတာလင်ဆက်ရက်ငှက်မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသများတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2016). "Sturnia malabarica". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ "A complete species-level molecular phylogeny for the "Eurasian" starlings (Sturnidae: Sturnus, Acridotheres, and allies): Recent diversification inahighly social and dispersive avian group" (2008). Molecular Phylogenetics & Evolution 47 (1): 251–260. doi:10.1016/j.ympev.2008.01.020. PMID 18321732.
↑ Ali၊ S. (2012)။ The Book of Indian Birds။ Revised by J.C. Daniel (13th ed.)။ Oxford University Press။ p. 218။ ISBN 978-0195665239။
ဤ စာကလေးနှင့် အလားတူငှက်မျိုးနွယ်ဝင် ငှက်အကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆက်ရက်တောင်ပံဖြူ&oldid=720443" မှ ရယူရန်
စာကလေးနှင့် အလားတူငှက် ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။